Ubani phakathi kwethu ongakaze ihlangabezane nenkinga ezingemnandi ezinjalo, njengoba ukuba khona isikhunta futhi isikhutha ezindongeni egumbini, yokugezela, ikhishi, izindlu zangasese, kuvulandi. Ngokuqinisekile, akukho enjalo. Futhi ngezinye izikhathi kubonakala isikhunta kukhona ukuyo yonke indawo, abakwazi ivele kunoma yiziphi izindawo oyifunayo. Ngeshwa, lokhu kuyiqiniso. Nokho, umbuzo ukuthi ukucubungula udonga isikhunta nangesikhunta, namuhla, akaphelelwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo. Ngakho-ke kungaphazamisi waphinda silihlobanise imininingwane nemininingwane.
Inkinga is sahlanganisa yokuthi isikhunta akuyona nje kokunikezwa kwe-sobuhle bayo bangaphandle ezindlini zokuhlala, kodwa futhi ungcolisa zokwakha. Ukuthola phezu ukhonkolo eluhlaza, itshe zokuhlobisa noma isitini, lezinhlamvu ziqhume esikhohlisayo silwanyana izingqimba mncane futhi equliswa ukwa. Lapha-ke willy-nilly, uqala ukucabanga ngalokho ukucubungula udonga isikhunta nangesikhunta.
Nokho, lokhu akugcini uhlu imiphumela engemihle. Into embi kakhulu ukuthi ngenxa izindonga ukubola kanye qwembe lemicu empunga elinamathela othini ukuhlushwa impilo yethu. It is asathuthuka eziningi izifo eziyingozi: ukucinana kwemigudu yokuphefumula, inyumoniya, inkwethu, conjunctivitis, eczema, isifuba somoya, komzimba kanye nokunye. Lesi ngesinye futhi isizathu esihle kungani ungeke ukuhlehlisa Ukufuna impendulo yombuzo othi lokho ukucubungula udonga isikhunta nangesikhunta. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukubhekana udaba ngaphansi okubheka kahle kule izigaba sokuqala lapho ivela khona.
Nokho, ngaphambi kokuba ucabanga ngalokho ukucubungula udonga isikhunta nangesikhunta, kubalulekile ukucacisa lapho kwathiwa bazohlawuliswa kwakhiwa nganoma yisiphi isizathu bona. Ngakho, ungakwazi ukugwema ukubonakala bola futhi qwembe lemicu empunga elinamathela othini esikhathini esizayo.
Yazi ukuthi izinga lokushisa lomoya ilingana degrees amabili Celsius nangaphezulu, kubhekwa esihle ukuthuthukiswa kwe-ukhunta. zingase zimiswe isikhunta at okushisa aphansi. I elikhulu ngenxa yokuphila we ukhunta nomswakama elilingana abangamaphesenti angu-95.
Kungani kukhona isikhunta? Isizathu esiyinhloko - isici ukuba sibe ukwakhiwa indlu. Ikakhulukazi, isikhunta nangesikhunta kusukela Ukuvikelwa kuyoba esincane, uma, isibonelo, kukhona ompofu izinga ukwahlukanisa interpanel amalunga omzimba noma okusezingeni eliphezulu umswakama okuqukethwe bokungasetshenziswa izinto.
Esinye isizathu - umswakama ekuphumeni ezindongeni ezindlini olumanzi. Njengomthetho, kwenzeka emizini emidala, lapho kungekho khona ungangenisi amanzi. Ngo izakhiwo zesimanje ukhunta kwenzeka kaningi kakhulu ngenxa nokusetshenziswa ingqikithi plastic amafasitela ubuchwepheshe, okuyinto kunikeza ukwahlukanisa ngokumelene umsindo nokushisa ekuqongeleleni. Ngenxa yalokho izinqubo of ukupholisa engokwemvelo amakamelo nomswakama ephukile okusezingeni eliphezulu ikhiqizwa. Yiqiniso, lena evumayo zizalela emhlabathini kwezilwanyana ezincane esikhohlisayo. Futhi okokuqala kwezithelo zonke isikhunta kwakhiwa futhi ukhunta egumbini lokugezela. Ayevame ivele grout phakathi Tile.
Ukuze silwe kwamazinyo futhi qwembe ukuba siphumelele, "isitha odinga ukukwazi mathupha."
Ngokuvamile kufanele ukulichitha kubo. Isikhunta ngokuyinhloko nomthelela ekwakheni izinto. Zisuka iminonjana ngesimo qwembe blue, oluhlaza, omnyama ensundu. Waba yini umphumela wesibindi umsebenzi alawa magciwane ngokuvamile kufanele bazilungisele umshini, futhi kwezinye izimo, ukuhlelwa kabusha indlu.
Bona konakalisa isakhiwo isihlahla, kanye ebusweni uqobo ekhaya ngenxa ithonya labo liba ezingabukeki grey-blue luhlaza. Again, unesifo hhayi kuphela ingxenye yobuhle isakhiwo. Blue engena ifilimu upende futhi ngaleyo ndlela yakha uhlobo Waterfall, okungukuthi, kucaba umzila ukungena umswakama ku ugodo. Nokho, uma amanzi ithole kahle ku indaba, kukhona mkhuba futhi kwakhiwa.
Kumele wathi ngezingozi bola, okuyinto ezintathu izinhlobo: ezimhlophe, ensundu virus. Imbobo wokuqala i-cellulose, kodwa umbala kwesihlahla ngesikhathi esifanayo ayishintshi kakhulu. Eyesibili uhlobo ukusebenza ngomhla ka-ezibonakalayo kangangokuthi uqhekeko esihlahleni. bola Amagcikwane bonakalisa isakhiwo ngokhuni kusuka ngaphakathi, futhi izinguquko zalo umbala ompunga noma amnyama. In parallel nalokhu impahla liwohloka obala ngenxa cellulose nokucekelwa.
Usongo ekhethekile isakhiwo sokhuni okubizwa ngokuthi ezimhlophe endlini amakhowe. Ngenyanga eyodwa nje, uyakwazi ukumosha kwesihlahla se-okhi phansi ngokuphelele ngamasentimitha amane obukhulu. Esikhathini esidlule, uma lokhu kwenzeka, indlu washa ukhunta ayikwazanga uthuthe kwezinye izakhiwo.
Uma sikhuluma bola ezimanzi, khona-ke amaqabunga ngetshe noma strip ukhonkolo darkish tinge onsundu ngokuphaphathekile noma abe phuzi, okusalayo ngemuva kokuphela ukwa. Dry bola ukhuni onesifo kushintsha umbala onsundu, bese okokusebenza libhujiswa ngokuphelele.
Isivikelo esingcono kunazo zonke ekumelaneni isikhunta nangesikhunta - kuyinto zokuvimbela. Nokho, kufanele kugcizelelwe futhi ukuthi into ebaluleke kakhulu - ukuba uthole ukuthi iyini imbangela yenkinga. Njalo ukuqaphela izinga evamile umswakama endlini. Qiniseka ukuthi ukupholisa bafudumale ukuze kuvumelane nemithetho design. Ungakhohlwa mayelana Ukushisa amadivayisi - kufanele ibekwe kahle emakamelweni sekupheleni.
Ngakho, i-prophylactic wokuqala ngokumelene isikhunta nangesikhunta - processing inkinga ezindaweni uviniga noma i-hydrogen peroxide.
Ezakhiweni Mount esinanyathiselwe iwindi eyenziwe ngepulasitiki, futhi pholisa isidingo ngiwavule ngokuphelele. Akufanele yini uvale umnyango uvalwe zangasese - ushiye ukuvulwa ezincane Ukungena komoya ngaphandle.
Kuphoqelekile lokufeza ukucutshungulwa ezindaweni ezithintekile ngezitimela ezikhethekile ezazilungiselelwe kuze kufinyelele ezingeni odongeni lwezitini (uma kudingeka). Izimali ezivela isikhunta nangesikhunta namuhla ibanga elikhulu edayiswa Hardware ezitolo. Ungakhetha ukuphuma ukuze isinqandakuvunda "Dali" noma fafaza "Biotol".
Uma kuyoba ukucutshungulwa isikhunta nangesikhunta ezindlini, ungakhohlwa afeze eziyinkimbinkimbi imisebenzi ku amanzi futhi ungangenisi amanzi into, ukuze uhlinzekele Ukuvikelwa kusukela ingress komhlaba kanye meltwater.
Ukuxazulula le nkinga Folk izindlela
With a touch of bola futhi kungenziwa combated, futhi ngosizo namathuluzi akhona. Omunye ikhambi lenkinga - kuyinto ukucutshungulwa ezindaweni ezithintekile nge creosote. Ungasebenzisa futhi isixazululo ekhethekile Kulula ukulungiselela ekhaya. Ngokuba ukulungiswa uzodinga chaza eyodwa kilogram zethusi sulfate noma isigamu amakhilogramu yensimbi sulphate ngamalitha eziyishumi yamanzi.
Abanye basikisela omunye kwengoma. Ukuze ekuwulungiseleleni liyadingeka ukuncibilikisa khilogremu isigamu zethusi sulfate kanye ezimbili amalitha acetic acid endaweni amalitha eziyishumi yamanzi. Ukwakheka ngenhla welashelwa zone ethintekile.
Ukususa isikhunta nangesikhunta uvame eyenziwa esebenzisa antiseptics. Lakhicitwe ezimweni zezimboni esekelwe ekhethekile chemical compounds. Lezi amalungiselelo nethonya eqinile imithi elwa nawo.
Namuhla ezidumile ikakhulukazi nge abathengi encibilikayo amalungiselelo isinqandakuvunda, kanye izindlela lapho diluent esetshenziswa. funa Enough manje NEZIVIKELAKUVUNDA, eyenziwe ngamafutha-based, ngokukhethekile, lezi zihlanganisa creosote. Okwamanje, kukhona sonke arsenal of antiseptics ezihlukahlukene, kodwa ngokuyinhloko jikelele spectrum izindlela kunzima ukuthola. Ngokuthenga eyodwa noma omunye umkhiqizo chemical, ungabi lazy cela umsizi yokuthengisa kanjani ukuyisebenzisa kahle.
Chaza kafushane ukuthi yini ngqo kufanele bathathe izinyathelo ukukhipha isikhunta futhi ukhunta ezindongeni. Okokuqala kubalulekile ukususa lodonga. Khona-ke, usebenzisa ibhulashi esintamo noma spatula ukuhlanza off the ungqimba ezilimele of usimende. In the isinyathelo esilandelayo kufanele luphathwe yokuhlanza yokwakheka odongeni ukuvula pores futhi asuse ifilimu usimende. Okulandelayo, udinga ukulungiselela ukwakhiwa esitolo-uthenge zokususa isikhunta futhi ngokusebenzisa roller awubeka odongeni, futhi lokhu kufanele kwenziwe phezu bonke ubuso. primer Antiseptic bantu bayosiza ekubuyiseleni umbala izindonga, ukwenza kube okuhlala isikhathi eside futhi ukususa ukungcola ebusweni base. Ngaphezu kwalokho, it kwandisa UKUQINA sekugcineni.
Okulandelayo, udinga ukulungisa ingxube eyomile of ungangenisi amanzi noma ungakwazi pre-ukuthenga it in esitolo. Nge ibhulashi udinga ukubeka isakhiwo phezu kodonga. Isinyathelo esilandelayo is primed ezijulile Ukungena ejenti yabo. Khona-ke kulandela olukhonkiwe odongeni zashpatlevat. Khona-ke udinga kabusha primed nenye Ukungena ezijulile. Ngesikhathi esigabeni sokugcina, Wallpapering.
Ngemva le nqubo, izindonga yakho izohlala ezomile isikhathi eside, it kungaqali ukwakha condensate, futhi ngenxa yalokho, isikhunta ngeke zisaba konakalisa ukuphila kwakho. Okumhlophe!
10 izinganekwane mayelana okusinda, okuyinto ingakubulala
Kungani umlilo ebhakedeni ukuma Isigaxa? izimpendulo eziningi
Polyurethane foam: izici kanye nokubuyekeza. Polyurethane foam ukwahlukanisa: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Indlela yokwenza ama-curls ngezinwele ezinde, ukuze zigcine usuku lonke
Yini ukuvakashela eCrimea? eCrimea zokungcebeleka
Anapa resort edolobheni eziyinxanxathela
Izicathulo Pink: yini okufanele uyigqoke? Imibono izithombe pink izicathulo
Osteoarthritis: Izimpawu kanye nokwelashwa kwezifo eziyinkimbinkimbi
Wathungela ukukhilosha imvu. Sheep hook: umdwebo incazelo
Sims 4 ngeke uqale: indlela yokulungisa?
"Blah Blah Kar" (Ukuhambela ezinye izindawo): ukubuyekezwa. "Blah Blah Kar" - Ukucinga zabahamba nabo
I-Maine Coon ebomvu: ukhetho lwezinyane
Manarola, Italy: izikhangibavakashi, incazelo, umlando kanye nokubuyekeza